यस्तो छ आज चैत ९ गते आइतबारको राशिफल – Karnalikhabar
यस्तो छ आज चैत ९ गते आइतबारको राशिफल
आज २०७६ चैत ९ गते आइतबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ?
ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
अघिल्लो - ग्यास आपूर्ति अझै असहज
वायुसेवा कम्पनी भाडा पुनर्विचार गर्न तयार - पछिल्लो